कैलालीमा बाढीः एकको मृत्यु, डेढ सय बढी घर डुबानमा – Bikash Khabar
कैलालीमा बाढीः एकको मृत्यु, डेढ सय बढी घर डुबानमा
Featured Slider Top News मौसम
शुक्रबार, ११ भाद्र २०७८ गते १३:२९ मा प्रकाशित	Author Pradip Adhikari	Comment(0)	132 Views
११ भदौ,काठमाडौँ । लगातारको वर्षाका कारण कैलालीको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । दक्षिणी क्षेत्रको भजनी नगरपालिकाका केही स्थान डुबानमा परेका हुन् । वर्षाका कारण लम्की चुहा नगरपालिका ६ गुलरामा खोलाले बगाउँदा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका अनुसार करिव ९० वर्षकी फूखिया थरुनीको खोलाले बगाउँदा मृत्यु भएको हो ।
उनलाई स्थानीय चरेला खोलाले बगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रहरी निरीक्षक भरत शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोलामा नुहाउने क्रममा फूखिया बगेर बेपत्ता भएकी थिइन् । उनको शव झण्डै सात सय मिटर तल भेटिएको छ ।
त्यस्तै कैलालीकै जानकी गाउँपालिकामा बाढीले करिब डेढ सय घर डुबाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले दिएको जानकारी अनुसार वडा नं. ४ र ७ को बस्तीमा बाढी पसेको हो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्दारका लागि पुगेको छ । उद्दारमा खटिएका गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले स्थानीयका धेरै घर डुबानमा परे पनि सबैलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताए ।
शाहीपुरमा कर्णाली नदीले गरेको कटान ।
ुहामी सबैतिर पुग्यौं । धेरै घरहरु डुबानमा परेका छन्, सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ,ु चौधरीले भने, ‘कतिपय घरमा खाद्यान्नलगायत बगाएको छ, यकिन विवरण भने अझै आउन सकेको छैन ।’ कर्णाली नदी अन्र्तगतको कुलरीया कुला (नदी) मा आएको बाढी गाउँ पसेको हो ।
यहाँ वर्षेनी कुलरीया कुलाले बाढीको समस्या निम्त्याउने गरेको छ । उता, भजनी नगरपालिका वडा नं.३, वडा नं. ८ का गाउँमा बाढी बसेको छ । स्थानीय खेमराज पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार कान्द्रा, पथरैया, काँढा नदीमा पानीको सतह बढ्दै जान थालेपछि स्थानीयहरु हुलाकी सडकमा आएका छन् ।
आयोजनाले ठूल्ठूला ढुंगा र स्थानीयले बोरामा बालुवा भरेर नदी कटान नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । नदीको बहावले ढुंगा र बालुवा भरेका बोरा बगाउन थालेपछि स्थानीय त्रसित छन् । सो क्षेत्रमा नदीले कटान गरे टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ५, ६, ७ र ८ का अधिकांश गाउँमा कर्णाली पस्नेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नदी कटान तीब्र भएसँगै ती वडाका बासिन्दालाई सजग रहन अनुरोध गरेको छ । टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ७ ले सूचना जारी गर्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट
११ कार्तिक,काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि अपराह्न ४ः०० बजे